सौर्य एयरलाइन्सकौ कर्मचारी रेश्माबाट बरामद भएको रकम टिकटबाट उठेको पैसा भएको अध्यक्ष दीपक पोखरेलको दावी – Durbin Nepal News
सौर्य एयरलाइन्सकौ कर्मचारी रेश्माबाट बरामद भएको रकम टिकटबाट उठेको पैसा भएको अध्यक्ष दीपक पोखरेलको दावी
पुस २३, २०७८ १:३७ मा प्रकाशित
काठमाडौं ।। सौर्य एयरलाइन्सका अध्यक्ष दीपक पोखरेलले विराटनगरबाट ल्याइएको ५० लाख रुपैयाँ कम्पनीको भएको जिकिर गरेका छन्। बिहीबार राजस्व अनुसन्धान विभागमा बयानमा उनले टिकट बिक्रीबाट उठेको ५० लाख रुपैयाँ सौर्य एयरलाइन्सबाट ल्याएको बताएका थिए।
उनले अनुसन्धान अधिकृतसँगको बयानमा एयरलाइन्सको टिकटबाट उठेको पैसा ल्याइएको बताए। प्रहरीले गत शनिबार त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको आन्तरिक टर्मिनलबाट एयरलाइन्सकी कर्मचारी विराटनगर–४ की ३३ वर्षीया रेशा शाक्य पोखरेललाई ५० लाख रुपैयाँसहित पक्राउ गरेको थियो।
अध्यक्ष दीपक पोखरेललाई अनुसन्धान अधिकृतले टिकटबाट उठेको रकम किन बैंकिङ च्यानलबाट पठाइएन ? किन नगद नै ल्याइनुको कारण के हो ? कम्पनीको बैधानिक रकम भए भए किन चाउचाउको कार्टुनमा किन आयो ? जस्ता प्रश्न गरेका थिए।
स्रोतका अनुसार उनले यो प्रश्नको उत्तर राम्रोसँग दिन सकेनन्। कम्पनीले धरौटी राखिसकेकाले विभागले त्यही आधारमा अनुसन्धान अघि बढाउनेछ।पक्राउपछि थप अनुसन्धानका लागि राजस्व अनुसन्धान विभागको जिम्मा प्रहरीले लगाएको थियो। विभागले शाक्यसहित तीनजना कर्मचारी नियन्त्रणमा लिएपछि दीपकले सौर्य एयरलाइन्सकै लेटरप्याडमा ५० लाख रुपैयाँ आफ्नो भएको जिकिर गर्दै कर्मचारीलाई रिहा गरिदिन अनुरोध गरेका थिए।